Coutinho oo ka hadlay sababa ku kuliftay in si dhaqsi ah uu kaga dhaqaaqo Barcelona… (Miyuu doonayaa in markale uu ku laabto Camp Nou?) – Gool FM
Coutinho oo ka hadlay sababa ku kuliftay in si dhaqsi ah uu kaga dhaqaaqo Barcelona… (Miyuu doonayaa in markale uu ku laabto Camp Nou?)
Dajiye August 19, 2019
(Germany)19 Agoosto 2019. Kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa warbaahinta gudaha Germany iyo kuwa caalamka u soo bandhigtay xiddgeeda cusub ee reer Brazil Philippe Coutinho, kaddib shir jaraa’id qaas ah ee lagu qabtay gudaha garoonka Allianz Arena.
Laacibka khadka dhexe ee reer Brazil Philippe Coutinho ayaa xalay gaaray dalka Jarmalka, si uu u maro tijaabada caafimaadka, wuxuuna maanta dhameystiray heshiiska amaahda ah ee halka xili ciyaareed uu ugu biiray kooxda Bayern Munich.
Philippe Coutinho ayaa ka hadlay waxyaabo badan ee quseeya mustaqbalkiisa kooxda Bayern Munich, wuxuuna sidoo kale ka warbixiyay mudada sanadka iyo barkii uu ku sugnaa gudaha Barcelona iyo sababa ku kulifay inuu si dhaqsi ah kaga soo dhaqaaqay naadiga reer Catalonia.
Coutinho oo ka hadlayay shirkiisa jaraa’id ugu horeeyay uu kaga soo muuqday kooxdiisa cusub ee Bayern Munich ayaa wuxuu yiri:
“Barcelona waa sheeko la soo maray, waxaan doonayaa inaan sii joogo Bayern Munich sanado badan, waxaan doonayaa inaan qeyb ka noqdo kooxdan”.
“Xaalada kooxda Barcelona uma soconin sida aan doonayay, Haa, dhibaatooyin badan ayaan soo maray, laakiin maanta waxaan halkan u joogaa shaqadeyda cusub”.
“Waxaan halkan u joogaa inaan ku guuleysto koobab badan, ciyaartoy badan oo ay ku jiraan halyeeyo ayaa halkan kula hadlay sida Lúcio iyo Thiago Alcântara”.
Shaxda rasmiga ah kooxaha Wolverhampton Vs Man United ee kulanka horyaalka Premier League
“Waan jeclahay taageerayaasha Liverpool” – Maxamed Saalax